Fekradaha Somali Links Contact Us Mas’uul katirsan Ahlusunah oo eedeyn ujeediyay Beesha Caalamka
Mas’uul sare oo katirsan maamulada ahlusuna waljamaac ee Konfurta Soomaaliya, ayaa fariin culus udiray hay’adaha iyo dowladaha shirarka uqabta madaxda Soomaalida kuwaasi oo ku howlan kala qeybinta umada Soomaaliyeed.
Gudoomiyaha Ahlusunah ee Gobolada Konfureed Mudane Ceydaruus Sayid Cali ayaa sheegay in shirarka laga dhax wado Soomaalida ay saldhig uyihiin dano shisheeye oo laga doonayo dalka iyo dadka Soomaaliyeed oo la aamisan yahay in caqiidadoodu tahay Ahlusunah Waljamaac.
Gudoomiyaha ayaa sidoo kale warsaxaafeedkiisa baaq ugu diray dagaalyahanada Alshabaab isagoo ka dalbaday ineysan dalka Qatar galin oo si nabad ah isugu soo dhiibaan.
Dhawaqa iminka kasoo yeeray garabkaan katirsan maamulada Ahlsunah ayaa waxa uu kusoo beegmayaa xili shirar is daba jog ah loo qabanayo madaxda Soomaalida oo ay qeyb kayihiin mas’uuliyiin iyaga matalaya Ahlusunah Waljamaac.
Related Items	Golaha Odayaasha B/Hawiye oo eedeyn tii ugu kululeyd u jeediyay xukuumadda Washigton. Gar-Gaarka UK oo weli Samafal kawado qaybo katirsan Magaalada Muqdisho oo heer gaba gaba ah. Tacsi : Allaah Unaxariistee Gudoomiyihii Golaha Midnimada & Badbaadada Beesha Mudulood, Xuseen Max’ud (Karar) Xildhibaanda beesha Sade oo si kulul u canbaareeyay talaabadii Xoogaga Maxkamaduhu ku qabsadeen Kismaayo Askari katirsan ciidanka malatariga dowladda Soomaaliya oo lagu toogtay deegaano ku dhow dhow degamada Bardaale ee gobolka Bay. Sarkaalkii hay’adda bad mareenada caalamka u qaabilsanaa bariga afrika oo xabsiga loo dhigay eedeymo la xiriira burcad badeednimo. Munaasabad loogu dabaal dagayay maalinta caalamka ee ciribtirka saboonimada oo maanta ka dhacday magaalada baydhabo. Beesha Karanle oo qaadacday qaabka loo wado hawlaha maamul u smaynta gobalka Banaadir. Afhayeenka ciidanka milateriga dawlada oo sheegtay in ay dagaalkii shalay ku qabteen askari katirsan ilalada suuuqa Bakaaraha iyo gudoomiyaha ganacsatada Bakaaro oo warkaas beeniyay. DEGDGE: Raysalwasaare Nur cadde oo magacaabay golo wasiiro isla markaana eedeyn dusha kaga tuuray madaxweyne Yuusuf. MOST READ Maydka nin loo gowracay Sida Xoolaha oo kale ayaa saaka la soo dhigay Isgoyska Bakaaraha Muqdisho(Daawo Sawiro Naxdin leh). Views:35583 Daawo Dhegeyso Buraanbur Wadani ah. Views:20952 Somalia: Somaliland and the 'London Conference' - Silanyo Must Challenge Denial of Somaliland's Rights Views:20809 GAALAYSIINTA QAXOOTIGA SOOMAALIDA EE KENYA (WAR-BIXIN). Views:10568 Muuqaalka Soomaaliya Sanadka 2008!!!(Daawo Sawiro badan) Views:9825 cabdibile Views:7958 Soomaalida Finland oo Baaritaan caafimaad oo lacag la´aan ah lagu sameynayo(Warbixin Muhiim ah) Views:7423 LATEST ADDED Maxa Kasoo Baxay Kulanki IGAD iyo Bulshada reer Kismaayo ? Qarax laga bad baadiyay dadka reer Balcad (Warbixin) Madaxweyne Axmed Madoobe oo Fariin Udhiibay wafdigi IGAD 8-Boolis ah oo lagu dilay deegaanka Waqooyi Bari Kenya Ciidamada Nabadsugida oo kala diray xildhibaanadi Mooshinka waday War-saxaafadeed "Dowladdu barnaamij bey ka diyaarisay dhaqan gelinta Federaalka"‏ Warar dheeraad ah oo kusaabsan Wafdiga IGAD ee maanta Kismaayo tagaya Xukuumada Somaliya oo beenisay Warar lagu daabacay Twitter-ka Somaliland oo maanta u dabaal degeysa 18-ka May. Gudoomiyaha baarlamanka Carabta oo maanta booqanaya xarunta baarlamaanka Soomaaliya